Abanqolobi abaceba ukuhlasela ngebhombu eDenmark naseJamani
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Abanqolobi abaceba ukuhlasela ngebhombu eDenmark naseJamani
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Bonke abarhanelwa ababanjiweyo bahlawuliswa ngokucwangcisa uhlaselo olunye okanye nangaphezulu okanye ukuzama ukuthatha inxaxheba kubunqolobi
Abanqolobi bathenga izinto zokwenza iibhombu kunye nezinye izixhobo
Abantu abasixhenxe ababekwe ityala lokuceba ubunqolobi okanye ukuzama ukuthatha inxaxheba kubunqolobi
Umngcipheko wokuhlaselwa kwabanqolobi eDenmark uthathwa ngokuba "ubaluleke"
Ukhuseleko lweDanish kunye neNkonzo yeNtlola (PET) ikhuphe ingxelo namhlanje ibhengeza ukuba abantu abasixhenxe bagcinwe ngamapolisa aseJamani nawaseDenmark ngezityholo zokuvelisa iziqhushumbisi kunye nokwenza iyelenqe lokuhlaselwa ngabanqolobi.
Bonke abarhanelwa ababanjiweyo bagwetyelwe ukucwangcisa uhlaselo olunye okanye nangaphezulu okanye ukuzama ukuthatha inxaxheba kubunqolobi.
Amadoda atyholwa ukuba afumene izinto zokwenza iibhombu kunye nezinye izixhobo, itsho ingxelo.
Amapolisa kwingingqi yaseDenmark ekuMbindi naseNtshona Zeland - ekhayeni elikomkhulu iCopenhagen - abambe amadoda amathandathu egqogqa phakathi kwe-6 ne-8 kaFebruwari. Omnye umrhanelwa welo qela wayevalelwe eJamani.
”Inkonzo yoKhuseleko kunye neNtlola yaseDenmark iluthatha kakhulu olu hlobo lwamatyala. Kuluvo lwethu ukuba kukho abantu abaneenjongo kunye namandla okuhlasela abanqolobi eDenmark, ”utshilo uSomlomo wePET.
Eli gosa longeze ngelithi umngcipheko wokuhlaselwa kwabanqolobi eDenmark uthathwa “njengobalulekileyo” kwaye ukubanjwa kwabo ngekhe kutshintshe inqanaba kukoyikiswa kukarhulumente ngoku.
Amapolisa aseDenmark kunye namagosa ezobuntlola bacwangciselwe ukubamba inkomfa noonondaba ngolwesiHlanu kusasa.